အလာဟ်ဆိုတာ Quran ကျမ်းအရ လူသားအားလုံးကို ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူဆိုပဲ။ အသိဥာဏ်ကလဲ အင်မတန်ကြီးတယ်တဲ့။ မွတ်ဆလင်တွေ သိပ်ပြီး အထင်ကြီးနေတဲ့ အာလာဟ် အကြောင်းကို ကျနော်တို့ ၂ ယောက်က Quran ကျမ်းပေါ်အခြေခံပြီး သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမယ်။
ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာ အာလာဟ်က Quran ကျမ်းထဲမှာ မိုဟာမက်ဟာ အကောင်းဆုံး လူသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ နောင်မှာလဲပဲ မိုဟာမက်လောက်ကောင်းမွန်တဲ့ လူမျိုးကို ဖန်ဆင်းတော့မှာ ဟုတ်ဘူးဆိုပဲဗျ။ အဲလောက်အထိကို ညွှန်းထားတာဗျ။ မိုဟာမက်ဆိုတာ ဓါးပြတိုက်၊ မုဒိမ်းကျင့် တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေအရကြည့်ရင် ရာဇ၀တ်မှုမှုကြီးတွေ ကျုးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုကောင်မျိုးကို ဆဒန်နဲ့အတူတူ ကြိုးစင်တင်ခံရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ အမေရိကန်က လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံပေါ်မှာ သေဒဏ်ပေးခံရမလား။ ဆိုတဲ့လူပါပဲ။ နောက်ပြီး အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်မှာ ၆ နှစ်ကလေးလေးကို ချစ်လို့ဆိုပြီး မိဘတွေကို သွားတောင်းတယ်ဆိုပဲဗျ။ စိတ်ထဲမှာ မြင်ကြည့်စမ်းပါ။ အဖိုးကြီး ကလေးငယ်ငယ်လေးကို ချစ်ရေးဆိုတာ ဘယ်လောက်များ ကျက်သရေတုံးလိုက်သလဲဗျာ? ဒီခေတ်မှာ အဲလိုချစ်ရေးဆိုကြည့်ပါလား ဖိနပ်ကို ချေးသုတ်ပြီး ပါးကို ကွဲအောင်ရိုက်ခံရမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ သြော် . . . ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီးရိုက်ရင် မိုဟာမက်ရဲ့ သိက္ခာကျသွားလေမလားလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သူဟာ ကုလားအုပ်ရဲ့သေးကို သောက်သုံးသူသာဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင်ပြောရရင် တမန်တော် မိုဟာမက်ရဲ့ ပါးစပ်ဟာ အိမ်သာခွက်နဲ့အတူတူပါပဲ။ (အိမ်သာခွက်မြင်တိုင်း တမန်တော်ကြီး မိုဟာမက်ကို သတိရပါ။ အိမ်သာခွက်ထဲ သေးပေါက်တိုင်း မိုဟာမက်ပါးစပ်ကို မြင်ယောင်ပါ) အိမ်သာခွက်ကို ချေးထိလို့ ဖိနပ်နဲ့တက်နင်းလို့ အိမ်သာခွက်ရဲ့ တန်ဖိုးနိမ့်မသွားပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ တမန်တော်မိုဟာမက်ရဲ့ ပါးစပ်ကို ဖိနပ်ချေးသုတ်ပြီးရိုက်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဥပဒေအရပဲကြည့်ကြည့် လူမှုရေးအရပဲကြည့်ကြည့် မိုဟာမက်ဟာ အဆင့်လုံးဝမရှိသူသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုကောင်မျိုးကို အကောင်းဆုံးလို့ပြောကတည်းက အလာဟ်ရဲ့ စိတ်ဟာ ပုံမှန်ရှိရဲ့လား?
ဒုတိယတင်ပြချက်တာက အာလာဟ်ဟာ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုရှာတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာပါပဲ။ Quran ကျမ်းအဆိုအရ ကျုပ်တို့မွတ်ဆလင်မဖြစ်ပဲနေတာ အလာဟ်က လုပ်ထားတယ်ဆိုပဲ။ သူရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ မကိုးကွယ်ချင်အောင် ဖန်တီးထားတာတဲ့ဗျ။ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့သေရင်လည်း သူ့ကို (အာလာဟ်) မကန်တော့လို့ ငရဲပြည်မှာ မီးရှို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီလုပ်ရပ်က ငပေါကြီးဖြစ်မနေဘူးလား? သူကပဲ တန်ခိုးနဲ့ မကန်တော့ချင်အောင် လုပ်ထားပြီး အဲဒါအတွက် ကျနော့ကိုပဲ အပြစ်ပေးတယ်ဆိုပဲ။ တကယ်ဆိုရင် အာလာဟ်ဟာ အဓိကတရားခံပါပဲ။ ဒီတော့ အာလဟ်ဟာ သူ့ကိုသူပဲ မီးပြန်ရှို့သင့်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ပြောတာ သဘာဝမ ကျဘူးလား?(ကျနော်တို့ မွတ်ဆလင်ကို အမြစ်ဖြုတ်နေတာလဲ အာလာဟ်က တန်ခိုးနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆဲချင်ရင် အာလာဟ်ကိုပဲ ဆဲကျပါ)
Quran ကျမ်း တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် အာလာဟ်ဟာ သူ့ကိုသူ ပြန်ပြီးကန်တော့တာတွေ ရှိသလို . . . သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်နေတာတွေလည်း လုပ်နေတယ်။ အရမ်းရယ်ရတယ် . . မွတ်ဆလင်တွေကို ကန်တော့ခိုင်းတယ်ဆိုတာ နည်းနည်းလေး နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မြင်သာအောင် ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် . . . ဦးသန်းရွှေက သူ့ကိုယ်သူ အလေးပြန်ပြုရင် ဟုတ်ပါ့မလား? ဘုရ်ှကပဲ သူ့ကိုသူ “ကျနော် သမတ္တဘုရ်ှကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ ပြောရင် ဟုတ်ပါ့မလား? ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဘုရှ် အဲလိုသာလုပ်ကြည့်ပါလား။ ဘေးကလူတွေက ဖမ်းချုပ်ပြီး အရူးဆေးရုံကိုပို့မှာပဲဗျ။ အေးဗျာ.. မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ အာလာဟ်ကတော့ အဲဒါတွေလုပ်နေတယ်ဗျာ။
ဒီတော့ မိုဟာမက်လိုကောင်မျိုးကို အကောင်းဆုံးလူသားလို့ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ အာလာဟ်.. အဓိပါယ်မရှိ ကျုပ်တို့ကို သူ့ကိုဆန့်ကျင်အောင် တန်ခိုးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ကိစ္စကို သေခြာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီး ကန်တော့နေတဲ့ အဖြစ်လည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အာလာဟ် ရူးနေပြီလော?
မွတ်ဆလင်များအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Quran ကျမ်းစာအညွှန်းများ သိလိုလျှင် မေးမြန်းကြပါ။ သို့သော် ထိုကျမ်းစာအညွှန်းများ ပြောပြခအအဖြစ် မွတ်ဆလင်ကနေထွက်ခွာပါမည်ဟု ကတိပေးရမည်.. . ထို့အပြင်ကျနော်တို့နှင့် မွတ်ဆလင် အမြစ်ဖြုတ်ရေးတွင် လက်တွဲပါဝင်ကူညီရမည်ဖြစ်ပါသည်။